inhlangano Wendawo komnotho abantu kuyisiyalo esiyisa ngokwesayensi. Utadisha inqubo ukubekwa, kanye kakade isakhiwo kwendawo abantu. inhlangano Wendawo okudingekayo ukuze nokwandisa futhi ngokushesha uhlelo lokuthuthukisa umphakathi zezenhlalo kanye nezomnotho. Lokhu isiyalo sihlobene eduze nezinye izimboni. Ngakho, ngokukhethekile, inhlangano indawo sabantu baxhumana emininingwaneni yabantu lesifunda kanye nomnotho, kanye geography kwezenhlalo noma kwezomnotho.
Ngo yokuthola lokungcolisa langempela lamalokishi izimo ezungezile, ukukhomba uhlelo zokuhlala. amaphuzu eduze ngaleyo ndlela kungenziwa banamathele nomunye ngezinga elincane kuka ne akude. Kulokhu-ke inhlangano ihlukene ungahlinzekela, futhi okuvela imizana ezahlukene uhlelo sokulungisa engumakhelwane ne kancane ibanga womhlaba phakathi kwazo.
Isicelo igrafu (njengoba kuqhathaniswa, isibonelo, yangokwesiko) kungaba isicelo ngokwanele ebanzi izindlela zezibalo. Kulokhu, ungasebenzisa ukwakhiwa amamodeli we ekuhlanganyeleni kahle abantu nomunye nezwe ngaphandle, futhi isekelwe yini ukuba zihlakulele ezihlukahlukene izinhlelo, okuyinto izobe kahle kakhulu nguMkhandlu inhlangano indawo sabantu.
Izinto eziyinhloko ukuthi ube ngandlela-thile degree of nomthelela nokubekwa sabantu abakule planethi yilezi ezilandelayo:
1. izimo Yemvelo. inhlangano Wendawo labantu ngempumelelo ngaphezulu kwesimo lesilungele ukuphila komuntu. Lezindawo zifaka, ngokukhethekile, futhi ezindaweni ezisogwini ethafeni nakwezifudumele, esipholile futhi ezishisayo zone zezulu. Ngesikhathi esifanayo, Arctic nase-Antarctic, ehlane maphakathi nezwe, futhi ezindaweni sezintaba ezibhekwa ayempofu kakhulu. Kufanele kuqashelwe, nokho, ukuthi ngokuhamba kwesikhathi, inhlangano indawo sabantu lencike kancane nesimo sezulu.
2. izici zomlando. Ngokusho idatha zomlando, 'umbuthano wokuqala wabantu sekukhona eNtshonalanga Yurophu, e-Afrika, e-Asia. Kancane kancane, ukwehla isabelo kule mithombo kanye ukuhanjiswa abantu ezindaweni kancane ugcwale planethi.
3. isigaba samanje inguqulelo yezibalo. Kwezinye izindawo imakwe ukusheshisa zokwenyuka kwenani labantu, kanti kwezinye izindawo bawohloka ngokushesha.
Labantu iqoqo labantu avuselelwe ngo inqubo ukukhiqizwa kabusha. Ukuze eyala eziningi zesayensi ukufunda abantu kuwumsebenzi omkhulu kakhulu. Lokhu kungenxa kakhulu yokuthi lokhu bakhona umthengi ezinkulu umkhiqizi ingcebo angaphatheki nezezinto ezibonakalayo. Gcwele ntu is ingxenye abantu, okuyinto kubhekwa omunye subsystems emphakathini - isakhiwo esikhudlwana.
Ukuze ukukhiqizwa kwezimpahla, kokusebenzisana nemvelo, ukuxazulula ezihlukahlukene ezindabeni ezibalulekile emphakathini has inhlangano efanele (isethi izakhiwo). It savela (inhlangano) ngokuhamba ekuthuthukiseni zomlando lesintu.
Emphakathini wanamuhla, ukuhlukanisa izakhiwo zezenhlalo, zezomnotho, zezombangazwe kanye nezinye. Nokho, kanye nezinhlangano umkhakha cishe kuwo wonke uhlelo lapho nokuma kwezwe. Lihlobene nokubhekana ubuso ezihlukahlukene izimo zenhlalo, zomnotho kanye nezemvelo ezikhona emhlabeni wonkana.
Ngakho, lesi simiso ukusatshalaliswa sabantu abakule planethi ngomqondo obanzi ihlanganisa izindaba ezihlobene nokubekwa kutemnotfo, ukuhlaliswa kwabantu, le nokwahlukaniswa kwemisebenzi (ngokwendawo), nokuxhumana indoda kanye nemvelo, nokunye.
Sakhiwo amaseli eukaryotic
Kungani ngidinga yokucebisa uranium? ukuhlaziywa enemininingwane
I ukuma yensimbi
Bear Grizzly - imifino imidlwembe
Aorta - elikuyi-aorta enhliziyweni kuyingozi .... uphawu yomthambo i-aorta
Namaculo kaKhisimusi simo - ezivela eRussia lasendulo kuze kube namuhla
Elegant kusihlwa igqoka, okumelwe wagqoka futhi
"Twilight," u-Alec Volturi: Biography, izithombe. Alec Volturi: indima umculi
Shona obungazungeza ingane izinyanga - umbandela we engqondweni nasemzimbeni
Indawo yokudlela "UDonna Olivia" (Ekaterinburg): izithombe, amamenyu, ukubuyekezwa
Game hearthstone ( "Black Intaba"): ukudlula